प्रचण्ड-माधवजस्तो नबन्न विद्यार्थी नेतालाई ओलीको निर्देशन « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदका लागि विवाद नगर्न भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालजस्तो नबन्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शनिबार ललितपुरको च्यासलस्थित एमालेनिकट अनेरास्ववियूको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा बोल्दै पदको लोभमा अहिल्यै नपर्न सुझाव दिँदै प्रचण्ड-नेपालजस्तो नबन्न पनि अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘एउटै पार्टीमा रहँदा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पदको मात्रै कुरा गरे । अहिले विद्यार्थी हुनुहुन्छ, पदको विवाद गरेर प्रचण्ड–माधव जस्तो हुनुभयो भने !’
तत्कालीन नेकपामा रहँदा मान सम्मानको कुरा गरेर प्रचण्ड र माधवले जहिले पनि पद मागेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ । उनले भने, ‘पद चाहियो भनेको छ। सम्मान चाहियो भनेको छ। अपमान भयो भनेको छ ।’
अध्यक्ष ओलीलेप्रचण्ड र नेपाल कम्युनिष्ट नभएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रचण्ड कसरी कम्युनिष्ट होइनन् भन्ने सवालमा भने, ‘प्रचण्डले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न सुहाउँछ ? नाम राखेर हुन्छ ? कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड भन्ने मान्छे कम्युनिष्ट होइन, यसमा कुनै शंका छैन ।’
प्रचण्डपछि अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको आलोचना गर्दै भने, ‘माधव नेपाल भन्ने मान्छे, जसले कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न खोज्दै छन् । अहिले हेर्नुहोस् त, वामपन्थी सरकार कसरी ढाले । प्रदेश सरकार ढाल्न खोज्दै छन्। यिनले कम्युनिष्ट भन्न सुहाउँछ ? आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने, कम्युनिष्ट सरकार ढालेर देउवाको सरकार बनाउने । माधव नेपालले देश र कम्युनिष्टविरुद्ध अपराध गरेका छन् ।’